Kanye anoti dambarefu rake idzva, hupenyu hwepablo, hahuzove pa apple music kana itunes
Kuru Nhau & Ongororo Kanye anoti dambarefu rake idzva, Upenyu hwaPablo, harizombove paApple Music kana iTunes
Kanye anoti dambarefu rake idzva, Upenyu hwaPablo, harizombove paApple Music kana iTunes
Inotaridzika sevanyori veMusic Music uye vashandisi veTunes hava & # 39; t kuwana kana kushambadza chero mimhanzi kubva kuKanye West & apos; s nyowaniHupenyu hwaPabloalbum. NeMuvhuro manheru, muimbi wekurekodha akatumira tweet kuti 'My album haimbofi yakambove paApple. Uye haife yakatengeswa ... Unogona chete kuiwana paTidal. ' Iyo yekupedzisira ndeye yekumhanyisa mimhanzi sevhisi iyo inove ndeyaJay Z.
Kanye & apos; s tweet harkens kudzokera kuna Taylor Swift & apos; s chisarudzo chekurega kubvumidza dambarefu rake1989kufambisa pamusoro peApple Music. Swift aipokana nesarudzo yeApple & apos; yekusabhadharisa mvumo kune maartist, vagadziri uye zvinyorwa zvemimhanzi zvakafambiswa panguva yemunhu wese anonyorera & apos; yemahara yemwedzi mitatu yekuyedza. Apple yakazochinja mamiriro ayo, uye Swift akabvumidza iyo albhamu kutenderera pamusoro Apple Music .
Musiyano uripo ndewekuti apo Swift anga achiedza kufambisira mberi chikonzero chevaimbi vese, chimwe chinhu chaakaomberwa nacho nevezera rake, Kanye anoita kunge ari kuita izvi kusimudzira munhu waanoda kwazvo pasirese-iye.
Akave ari mashoma mazuva mashoma emurume waKim Kardashian & apos; Pakupera kwesvondo, Kanye akaonekwa paSNL, akatumira tweet kuti aive $ 53 mamirioni pachikwereti, uye akatumira zvikumbiro zvekunyepedzera kuna Mark Zuckerberg naLarry Page. Akabvunza Facebook muvambi we $ 1 bhiriyoni.
Munguva pfupi yapfuura, Apple yakazivisa kuti ine mamirioni gumi nerimwe vakabhadharira kunyorera kuApple Music . Vanhu vanobhadhara $ 9.99 pamwedzi, nepo mhuri inosvika kusvika kumatanhatu nhengo ichabhadhara $ 14.99 pamwedzi.
Hupenyu hwaPablo hahuchafambiswa paApple Music kana kutengeswa paTunes
mabviro: @kanyewest kuburikidza neAppleInsider
t nhare mbozha tabu s6
moto z kutenga imwe uwane imwe
Yekutanga yepamutemo Nhema Chishanu 2019 kushambadzira kubva kumutengesi mukuru iri pano
Kuchinjira kuIOS? Heano mamwe matipi uye madiki aungave iwe ungazive nezvazvo
Android 10 ine One UI 2.0 pane iyo Samsung Galaxy S10 +: Maoko-on nezvose zvitsva maficha
Samsung & apos; s isina waya yekuchaja pad (yeGPS S6 uye S6 kumucheto) kuita $ 59
Maitiro ekutarisa AirPods Pro bhatiri danho pamafoni eApple
Kumbira mukana wekutanga wekutamisa zvemukati kubva kuGoogle Play Mumhanzi kuenda kuYouTube Music
iPhone Gmail Push Notices dzisiri kushanda? Heano & maapos ekugadzirisa izvo
Heano maitiro iPhone 12 kamera inofungidzirwa kubuda kunze kweiyo iPhone 11 isina kukwidza megapixels
Chengeta izvi Apple zvishandiso kure nepacemaker yako
Vashandisi vanotaura zvinonakidza glitch muSamsung & apos; s Imwe UI 3.0, asi ine nyore kugadzirisa